Dowladda Talyaaniga oo xaqiijisay in 587 qaxooti Soomaali ah
Ilaa iyo hadda 23,720 muhaajiriin ah oo ay Soomaali ku jirto ayaa ka degay xeebaha Talyaaniga tan iyo bilowgii sanadkaan 2020. Isla mudadaas, sanadkii hore waxaa gaaray 7,633 halka sanadka 2018 ay ahaayeen 21,024. Tiro koob ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Talyaaniga.
Seddexdii maalmood ee ugu dambeysay, waxaa soo degay 203 qof (65 Isniin, 95 shalay iyo 43 maanta) taas oo kordhisay tirada guud ee dadka ka soo galay badda dalkeena tan iyo bilowgii bisha oo ay gaareen 4,380.
In ka badan 23,700 oo muhaajiriin ah ayaa ka degay Talyaaniga sanadkii 2020, 9,878 waa muwaadinin reer Tunisia ah (42%), iyadoo lagu saleynayo waxa lagu dhawaaqay xilligii laga soo dagayay; kuwa kale waxa ay ka yimaadeen Bangladesh (3,175, 13%), Algeria (1,125, 5%), Ivory Coast (1,031, 4%), Pakistan (948, 4%), Sudan (799, 3%), Morocco (619, 3 %), Masar (598, 3%), Somalia (587, 2%), Afghanistan (516, 2%) marka lagu daro 4,444 qof (19%) oo ka yimid dowlado kale ama wali ay socoto howshooda aqoonsiga.
Marka laga hadlayo joogitaanka muhaajiriinta ee soo dhaweeyay, xogta waxa ay ka hadlayaan 82,072 qof oo ku baahsan dalka oo dhan kuwaas oo 217 ay yihiin meelaha kulul ee Sicily, 57,496 ee xarumaha soo dhaweynta iyo 24,359 ee xarumaha Siproimi.
Gobolka ay ku nool yihiin boqolleyda ugu badan ee muhaajiriinta la soo dhoweeyay waa Lombardy (13%, wadar ahaan 10,961 qof), waxaa ku soo xigta Emilia Romagna (11%), Lazio iyo Piedmont (95), Sicily (8%), Campania (7%), Tuscany iyo Veneto (6%).
Xiddig Ka Tirsan Chelsea Oo Ka Degay Koox Kale, Saxeexyadii